UThixo Ungunaphakade: ongapheliyo kunye noPhakade
UThixo udlalwa ngokungaqhelekanga; Nangona kunjalo, kukho indlela engaphezulu kweyodwa yokuqonda ingcamango "yobomi obungapheliyo." Ngakolunye uhlangothi, uThixo unokucinga ukuba "ngonaphakade," oku kuthetha ukuba uThixo ukhona kuwo onke amaxesha. Ngakolunye uhlangothi, uThixo unokucatshangelwa ukuba "ungapheliyo," oku kuthetha ukuba uThixo ukhona ngaphandle kwexesha, engaxhomekanga kwinkqubo yesiphumo nesiphumo.
Ingcamango yokuba uThixo ufanele ube ngonaphakade ngeengcinga ezingapheliyo zixhomekeke kwisiqalo sikaThixo ukuba uyazi yonke into nangona sihlala sisenkululeko yokuzikhethela.
Ukuba uThixo ukhona ngaphandle kwexesha, ngoko uThixo unokuzigcina zonke iziganeko kuzo zonke iimbali zethu kwimbali njengokuba bekunye. Ngaloo ndlela, uThixo uyazi ukuba ikusasa lethu liyabamba ngaphandle kokuchaphazela yethu yethu-okanye inkululeko yethu yokuzikhethela.
Isifaniso sokuba le nto ingenziwa ngayo ngoko yenziwa nguTomas Aquinas, owabhala ukuba "Lowo ohamba endleleni ababoni abo bamlandela; kanti yena obona yonke indlela esuka ekuphakameni ubona kwangoko bonke abo bahambayo. "Ngoko, unkulunkulu ongenakunqwenelekayo, wacinga ukugcina yonke inkalo yembali kanye kanye, nje ngokuba umntu unokuzigcina iziganeko kulo lonke ikhosi kwendlela kwangoko.
Isisiseko esibaluleke ngakumbi sokuchaza "ngonaphakade" njengento "engapheliyo" yimbono yesiGrike yamandulo ukuba unkulunkulu ogqithiseleyo kufuneka ukuba abe ngunkulunkulu ongenakutshintsha. Ukufezeka akuvumeli ukutshintshwa, kodwa utshintsho ngumphumo obalulekileyo woluphi na umntu ohlangabezana neemeko ezitshintshayo kwinkqubo yembali.
Ngokutsho kwefilosofi yamaGrike , ingakumbi efumaneka kwi-Neoplatonism eya kubamba indima ebalulekileyo ekuphuhliseni i-theology yamaKristu, "okwenene okwenene" yinto ekhona ngokugqibeleleyo kwaye ingatshintshi ngaphandle kweengxaki kunye neengxaki zehlabathi lethu.
Ephakade ngombono ongunaphakade, ngakolunye uhlangothi, udlalisa uThixo oyingxenye kwaye wenza ngaphakathi kwimbali.
Unothixo onjalo ukhona kwixesha elifana nabanye abantu nezinto; nangona kunjalo, ngokungafani nabanye abantu kunye nezinto, unkulunkulu onjalo akanalo isiqalo kwaye akapheli. Ngokuqinisekileyo, unkulunkulu ongunaphakade akanako ukwazi iinkcukacha zezenzo zethu zexesha elizayo kunye nokukhetha ngaphandle kokugxila kwiintando zethu zokuzikhethela. Nangona kunjalo, kunzima ukuba, "ingunaphakade" iyenziwa ngokugqithiseleyo phakathi kwabakholwayo abaphakathi kunye neengcali ezininzi zefilosofi kuba kulula ukuyiqonda kwaye ngenxa yoko ihambelana namava kunye nenkolo yabantu abaninzi.
Kukho iingqungquthela ezininzi ezisetyenziselwa ukwenza ityala malunga nembono yokuba uThixo uqiniseke ngexesha. UThixo, umzekelo, ucingelwa ukuba uyaphila - kodwa ubomi luluhlu lwesiganeko kunye neziganeko kufuneka zenzeke kwisakhelo sesinye sexesha. Ukongezelela koko, uThixo wenza izinto kwaye kubangela ukuba kwenzeke izinto - kodwa izenzo zeziganeko kunye neengcambu zixhumene neziganeko, ezi (njengoko sele ziphawulwe) zigxilwe ngexesha.
Igalelo "elingunaphakade" lenye yeyiphi ingxabano phakathi kweliGrike kunye nelifa lamaYuda lefilosofi eyona nto ibonakala kakhulu. Izibhalo zombini zamaYuda kunye namaKristu zikhomba kuThixo ongunaphakade, osebenza kwimbali yabantu, kwaye unako kakhulu ukutshintsha.
Kodwa-ke, inkolo yobuKristu ne-Neoplatonic, ngokuqhelekileyo, ixhomekeke kuThixo ophelele "kwaye uphelele ngaphaya kolunye uhlobo lobomi, siyaqonda ukuba ayisabonakali.
Oku mhlawumbi sisinye isibonakaliso sobungakanani obalulekileyo kwiingcamango ezisemva kweengcamango zakudala malunga nento ethi "ukugqibelela." Kutheni ukuba "ukufezeka" ibe yinto engaphezu kwamandla ethu okuqonda nokuqonda? Kutheni kuthethwa ukuba malunga nantoni na into eyenza sibe ngabantu kwaye yenza ubomi bethu bufaneleke ukuhlala into ephazamisa ukuphelela?
Le mibuzo neminye ibangela iingxaki ezinzulu zokuzinza kwempikiswano yokuba uThixo makabe engaphelelwa ixesha. UThixo ongunaphakade, nangona kunjalo, ibali elihlukile. UThixo onjalo uqondwa ngakumbi; Nangona kunjalo, umxholo ongunaphakade uhlala ungqubuzana nezinye iingubo zeNoplatonic ezifana nokufezeka kwaye ezingenakuguquguquka.
Ngandlela-thile, ukucinga ukuba uThixo unaphakade unengxaki.
Inyaniso NgoChristopher Columbus